Socdaalkii Wasiirka Ingiriiska Ahi Ku Timid Hargeysa Iyo Muqdisho Oo Banaanka Soo Dhigay Kala Fogaanshaha Somaliland Iyo Soomaaliya | Biyoguurenews.com
Home Wararka Socdaalkii Wasiirka Ingiriiska Ahi Ku Timid Hargeysa Iyo Muqdisho Oo Banaanka Soo...
Socdaalkii Wasiirka Ingiriiska Ahi Ku Timid Hargeysa Iyo Muqdisho Oo Banaanka Soo Dhigay Kala Fogaanshaha Somaliland Iyo Soomaaliya
Waxa magaalooyinka Hargeysa iyo Muqdisho ee Somaliland iyo Soomaaliya toddobaadkan socdaal ku timid Wasiiru dowlaha wasaaradda arimaha dibedda ee Britain ugu qaabilsan Afrika Ms Harriet Baldwin.
Wasiirkan oo hoggaaminaysay wefti diblomaasiyiin ah oo u badnaa haween, ayaa waxa ay Hargeysa iyo Muqdisho kaga dhawaaqday laba taageero oo uu Ingiriisku maalgelinayo, kuwaas oo qorsheyaashoodu aad u kala fogyihiin. Hargeysa waxa ay ka sheegtay in Ingiriisku 25 Milyan oo lacagta Ingiriiska ah ku maalgelinayo kaabayaasha dhaqaale iyadoo lagu shubayo Sanduuqa horumarinta ee Somaliland ee SDF, halka ay Muqdisho kaga dhawaaqday 7 Milyan oo lacagta UK ah oo lagu taageerayo AMISOM.
Muqdisho waxa ay booqatay xarumo ciidan oo AMISOM mamusho,
Ingiriiskuna maalgeliyo, halka ay Hargeysa booqatay xarumo caafimaad iyo jaamacado Ingiriisku taageero u fidiyo.
Wasiir Harriet oo lugteeda hore ku soo martay magaalada Muqdisho ee Soomaaliya, waxa ay kaga dhawaaqday 7 milyan oo lacagta Ingiriiska ah oo uu Ingiriisku ku caawinayo ciidamada AMISOM, waxaanay wasiiradu hoosta ka xariiqday doorka ay AMISOM kaga jirto ammaanka Soomaaliya iyo sida ay Soomaaliya uga caawinayso inay iskeed ula wareegto ammaanka dalkeeda. Socdaalka Wasiir Harriet ee Muqdisho, ayaa u muuqday in ujeedadiisa u weyni ahayd arrimaha ammaanka iyo caawinta AMISOM.
Intii ay Muqdisho joogtay waxa ay booqatay xarunta Booliska lagu tababaro taas oo ay maalgaliso UK iyo xarumaha AMISOM, iyado ka codsatay wadamada aduunka in ay deeq bixintoda lacageed ee AMISOM ay sii kordhiyaan.
Waxa ay la kulantay Raysalwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, inkastoo ay bogaadisay qorsheyaal horumarineed oo ay dawlada Muqdisho fulisay haddana kumay dhawaaqin wax taageero horumarineed ah oo uu Ingiriisku maalgelinayo.
Lugteedii labaad waxa ay Axadii ku timid Wasiirka Ingiriiska ee Afrika caasimadda Somaliland ee Hargeysa, waxaanay kaga dhawaaqday lacag horumarineed oo aad u balaadhan oo dhammaanteed la xidhiidha horumarka iyo kobaca dhaqaalaha. 25 Milyan oo lacagta Ingiriiska ah ayay Wasiir Harriet sheegtay in Ingiriisku ku darayo wejiga labaad ee Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee SDF, si kor loogu qaado kaabayaasha dhaqaale.
Wasiir Harriet, intii ay Hargeysa joogtay waxa ay booqatay xarumo caafimaad iyo kuwo Jaamacadeed oo uu Ingiriisku maalgeliyo, iyadoo balan qaaday in dawladooda UK sii wadayso taageerista xarumahan.
Waxa kale oo ay la kulantay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, iyadoo kulankaas kaga dhawaaqday lacagtaas 25 Milyan ah ee ay dawladda UK ku taageerayso kaabayaasha dhaqaale ee Somaliland.
Wasiir Harriet, ayaa intii ay Muqdisho joogtay waxa ay waraysi siisay telefishanka Goob-joog, waxaana la weydiiyay in Ingiriisku noqonayo dawladda u horaysa ee aqoonsta Somaliland, waxaanay ku jawaabtay, “Maya, Ingiriisku ma aqoonsana Somaliland, waana gobal ka mid ah Soomaaliya, waxaanuse dhiirigelinaynaa dadka Soomaaliyaeed I yagoo u maraya geedi socodka siyaasdeed inay uga wada hadlaan go’aanka ay ka gaadhaan sida ugu haboon ee Soomaaliya hore loogu sii wadi karo.”
Waxa muuqata kala duwanaanshaha labada socdaal ee ay weftiga ay Wasiirkani hoggaaminaysay ku yimaadeen magaalooyinka Hargeysa iyo Muqdisho, Hargeysa waxa uu Ingiriisku u yimid inuu Somaliland ka caawiyo arrimaha horumarka iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaale iyo weliba xoojinta arrimaha doorashooyinka, halka weftigu Muqdisho u tagay taageerista AMISOM iyo inaanay AMISOM si fudud uga bixin Soomaaliya si aanu ammaanka Soomaaliya ugu dhicin gacan dhexe maadaama oo aanay dawaladda Soomaaliya awood u lahayn gacan ku haynta ammaankeeda.
Previous articledaawo masuuliyiin ka tirsan baarlamaanka jabuuto oo somaliland yimid iyo ujeedada booqashadooda
Next articleAjanabigii u Horeeyay oo u dhshay dalka bagistaan ayaanu dalka ka mustaafurin doonaa, wasiirka shaqada iyo arimah bulshada somaliland